Manicure French n'ụlọ maka mbọ mkpụmkpụ | Bezzia
Susana godoy | 11/10/2021 10:00 | Mma
Inwe ike ịkpụcha mbọ aka anyị n'ụlọ bụ ezigbo echiche. Maka na naanị otu a ka anyị nwere ike isi mezie mbọ anyị oge ọ bụla anyị chọrọ. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ka esi eme a Manicure French n'ụlọ maka obere mbọ, mgbe ahụ ịkwesịrị ịgbaso usoro ole na ole dị mfe.
Ị ga -ahụ na site na obere nka ị nwere ike nweta ihe niile ịchọrọ. Nke mbụ, ị ga -eme ihe nhọrọ nke ihe ma ọ bụ ngwaahịa kacha mma sitekwa ebe ahụ, ị ​​nwere ike bido na ọrụ gị nke ga -abụ ihe kacha atọ ụtọ na ngwa ngwa. Anyị ga -agbada na ya?
1 Hichaa mbọ gị nke ọma tupu ịmalite
2 Bee mbọ gị nke ọma wee jiri faịlụ
3 Na -elekọta cuticles gị mgbe niile
4 Ebe nchekwa maka ime manicure French n'ụlọ maka obere mbọ
5 Enamel isi
6 Ezi ntuziaka maka ịkpụcha mbọ aka
Hichaa mbọ gị nke ọma tupu ịmalite
Nhicha bụ otu n'ime usoro anyị ga -eburu n'uche tupu ịmalite ọrụ ịma mma ọ bụla. Ya mere, a gaghị ahapụ ntu ahụ n'azụ. Ọ bụrụ na ị nwere enamel fọdụrụnụ, ị maraworị na ọ kacha mma iji nhichapụ ntu wepụ ha ma ọ bụrụ na ọ nweghị, ị nwere ike itinye ntakịrị ihe ọ lemonụ lemonụ lemon mgbe niile ka ị nwee ike ịhapụ nsị ụfọdụ. Cheta na ịhịa aka site na obere mmanụ mmanụ ga -ewepụ ụdị nkụ niile na nsonaazụ ya ga -aka mma.
Bee mbọ gị nke ọma wee jiri faịlụ
Iji mee manicure French n'ụlọ maka mbọ mkpụmkpụ, ọ dị anyị mkpa ịkpụcha ha. N'ihi na ngwụcha ahụ ga -adịkwa mma dị ka mbọ dị ogologo ma n'ezie ha ga -enye gị nsonaazụ dị mfe nke ị nwere ike iyi kwa ụbọchị, na -enweghị ịdị iche. N'ihi nke a, ị nwere ike ịhapụ naanị ntabi milimita ole na ole wee nye m ụdị ịchọrọ na faịlụ a. Ị nwere ike họrọ akụkụ anọ ma ọ bụ nke gbara okirikiri, dabere na mkpa gị. Cheta na ụzọ isi tinye ha na -aka mma mgbe niile site n'ime.
Na -elekọta cuticles gị mgbe niile
Nke igbutu ha nọ n'azụ anyị, maka na anyị nwere ike ịme nzọ dị nfe yana iji osisi osisi oroma ma ọ bụ ngwa pụrụ iche maka mpaghara a, nke ga -abụ ihe na -ewepu ihe. Cheta na tupu i kpebie, ihe kacha mma bụ wetuo ha ntakịrị na ị nwekwara ike iji ntụ ọka mmanụ olive mee ya. Nke a ga -eme ka mpaghara ahụ dị nro ma mee ka ọ dịrị ya mfe ịrụ ọrụ. Anyị na -atụgharị ya azụ ntakịrị na nsonaazụ ya ga -adị ka achọrọ.
Ebe nchekwa maka ime manicure French n'ụlọ maka obere mbọ
Ozugbo anyị kwadebere mbọ anyị, ọ bụ oge ichebe ha tupu polish n'onwe ya. N'ihi ya, anyị ga -enwerịrị ntọala nchebe n'aka. Ọ bụ ya ka anyị ga -eji elekọta ntu ahụ, anyị ga -enye ya hydration dị mkpa ma n'otu oge ahụ ọ na -eme ka agba enamel ọdịnihu dị mma. ọbụna karịa. Ọ bụ otu n'ime usoro dị mkpa, n'ihi na ụzọ ahụ anyị ga -egbochi ha ka ha ghara ịcha edo edo. Agbanyeghị cheta na ị gaghị emebekarị atụmatụ, mana ị kwesịrị ikwe ka mbọ ahụ na -eku ume ruo ụbọchị ole na ole.
Mgbe anyị chebesịrị mbọ anyị aka, ọ nweghị ihe dị ka itinye mkpuchi ala mbụ. N'okwu a, ị nwere ike họrọ akwa mkpuchi enamel transperent ma ọ bụ nke nwere ezigbo pink ma ọ bụ ịgba ọtọ. Nke a ga -enye ya ntakịrị agba nke ga -egosipụtakwa ịkpụ aka n'onwe ya. Mgbe oyi akwa nke mbụ kpọnwụrụ, ị nwere ike nye ya nke abụọ ka n'ikpeazụ ịkpụcha aka anyị nwekwuo nguzogide.
Ezi ntuziaka maka ịkpụcha mbọ aka
Mgbe ogologo ntu ahụ pụtara ihe karịa, ọ bụ eziokwu na anyị nwere ike họrọ itinye ahịhịa ahụ ozugbo na ahịhịa. N'ezie, ọ bụrụhaala na ị nwere nka ma ọ bụ omume. Mana ọ bụrụ n'ịhọrọ iji egwu egwu, ọ nweghị ihe dịka ịkụ nzọ na ụfọdụ ntuziaka ma ọ bụ akwụkwọ mmado maka ọrụ a. Na ha dị gịrịgịrị n'ezie ka ha wee nwee ike nwee ekele mana naanị ntakịrị. A ga -enwe ntọala kacha mara mma nke ịkpụcha mbọ aka anyị. Anyị ga -edobe ha na nsọtụ ya, anyị ga -ete enamel ọcha wee wepu ya mgbe akụkụ niile akpọnwụla. Ugbu a ntakịrị enwu ma gosi ha!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Manicure French n'ụlọ maka obere mbọ